झा’रफुकको क्रममा किशोरीको ह,त्या, ‘माता’ भनिने झा,क्री प,क्राउ ! – Patrika Nepal
झा’रफुकको क्रममा किशोरीको ह,त्या, ‘माता’ भनिने झा,क्री प,क्राउ !
पुष २७, २०७८ मंगलबार 38
सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–२ घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ धुन्चेपाखा बस्ने १४ वर्षीया बालिका रोशनी श्रेष्ठको झा’रफुकको नाममा ह,त्या आ,रोपमा आफूलाई माता बताउने उर्मिला तामाङ शाहीलाई प्रहरीले प,क्राउ गरेको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाठौंका प्रवक्ता तथा एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार प,क्राउ पर्ने महिला रानीवन पानीट्यांकीमा झा’रफुक गरेर बस्दै आएकी थिइन्। झा’रफुकको नाममा ती महिलाले बालिकाको शरीरमा त्रि’शुलले रो’पेको आ,रोप लागेको छ।
सोही कारण बालिकाको मृ’त्यु भएको हुनसक्ने भन्दै उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त स्यम्भूले प,क्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। माता बताउने महिलालाई शनिबार नि,यन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
टाउको दु’ख्ने लगायत विभिन्न स’मस्या भएपछि बालिकालाई उनकी आमा राधिकाले शाहीकोमा पुर्‍याएकी थिइन्।
ती बालिकालाई करिब तीन सातादेखि ‘माताको ट’हरोमा लगेर राखिएको थियो। तीन सातासम्म उनकी आमाले बालिकालाई किन त्यहाँ राखिन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बालिकाको श’व पो,ष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा राखिएको छ।
Posted in घटना
Prevनेपालमा फेरि स्मार्ट लकडाउन , कहाँ–कहाँ हुँदैछ लकडाउन ?
Nextमाताले झारफुकमा मारेकी १४ वर्षीया बालिकाको टाउको, ढाड, नितम्बमा त्रिशूलका प्वाल
अचम्मको परम्परा, जहाँ पहिला यौन,सम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ
बाल गायक सुप्रीम मल्ल आमा बुवा सहित पहिलोपटक मिडियामा,परिवारमा चल्यो रुवाबासी(भिडियो हेर्नुहोस)